Malunga nathi - Shandong Moenke door Industry Co., Ltd ..
Shandong Moenke ucango Industry Co., Ltd. imi kwisixeko esihle Jinan isixeko elikomkhulu Shandong. Inkampani igubungela indawo ye-15,302 yeemitha zesikwere. Ngumvelisi omkhulu wobuchwephesha emnyango weSibhedlele eTshayina. Inkampani inabasebenzi kunye namagcisa angaphezulu kwama-225 kunye nenqwaba yamalungelo awodwa omenzi wechiza esizwe. Igcine ukusebenzisana ngokusondeleyo nezibhedlele ezininzi zasekhaya ezaziwayo ixesha elide.
Imveliso yethu ephambili iingcango ezizenzekelayo, uMoenke uzibophelele ekuboneleleni ngolawulo locango / ucoceko lwesibhedlele / ukucoceka kwemizi-mveliso kwizisombululo ngokubanzi zokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi zokhuseleko, ukuthembeka, ubuhle, intuthuzelo kunye nokuqina, kwaye ngoku uba nguvulindlela wokwakha indawo yokungena kwi-aesthetics . Singomnye weminyango emithathu eyaziwayo yesibhedlele saseTshayina.
I-Moenke ixhomekeke kubuchwephesha bamazwe aphesheya kunye nezixhobo, ifumana iingcinga ezithandwayo zoyilo lwamanye amazwe, amasiko acwangcisiweyo acwangcisiweyo kunye nokuma kwemveliso, ihambelana ngqo nesiQinisekiso soBhaliso lwe-GB / T24001-2016 / ISO14001: 2005 umgangatho wamazwe aphesheya kunye nenkqubo yolawulo lwemveliso, yenza uthotho iimveliso kunye nokusebenza ezinzileyo, wasele cwaka, ekhuselekileyo kunye nokusetyenziswa, uyilo ekrelekrele humanized. Kwaye sakha iitekhnoloji zelungelo elilodwa lomenzi wesithathu.
Izicelo zomnyango kaMoenke kuluhlu olubanzi lweeNkqubo zoShishino zisetyenziswa ngokubanzi kwiibhanki, iihotele, izakhiwo zeofisi, iimarike ezinkulu, njl. amashishini kunye namaziko.
Kwilizwe liphela, sinikezela ngoluhlu olupheleleyo lweendidi eziphezulu zeemveliso kunye neenkonzo ukwanelisa iimfuno zabathengi bethu zokupasa amandla, ukusebenza kwezokhuseleko kunye nobuhle bobugcisa. Ubunzulu bamava ethu, itekhnoloji entsha, itekhnoloji ebalaseleyo kunye nenkqubo yenethiwekhi yokuthengisa kwihlabathi liphela zihlala zisisona sisombululo sisiso sihlangabezana neemfuno zakho! 225 Moenker wamkelekile ukuba undwendwele umzi-mveliso wethu.
Umnqophiso wethu: Ingxoxo yinxalenye ebalulekileyo yentlanganiso egqiba isigqibo esiya kusekelwa ngokubulawa.
I-vison yethu: Yiba yinkokeli ephezulu kwishishini lomnyango weSibhedlele.
Ixabiso lethu: Ukufezekiswa kwabathengi, ukuthembeka kunye nokuthembeka ukufaneleka, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nokuzama ukugqwesa.
Inkampani yethu yandisa ukusetyenziswa kwemigangatho yesizwe kunye neyeshishini, ilawula ngokungqongqo inkqubo nganye, iqinisekisa umgangatho wecandelo ngalinye. Emva kokuba izixhobo zihanjiswe kubathengi bethu, siya kwenza iseti epheleleyo yophando malunga nokusebenza kwezixhobo zethu, emva koko siphucule itekhnoloji kunye nomgangatho wethu. Kwakhona safumana i-ISO9001: 2008 kunye nesatifikethi se-CE.
Inkampani yethu ineqela lobuchwephesha eliphezulu, ngaphezulu kwama-20 abasebenzi bezobugcisa. Baza kuzama konke okusemandleni abo ukwenza izixhobo ezifanelekileyo kubathengi bethu. Sinesebe elizimeleyo emva kokuthengisa, inkonzo ebanzi emva kokuthengisa kubathengi. Kwisithuba seeyure ezingama-24 emva kokufumana umyalezo wokulungisa, ingxaki ifikelelwe kuwe. Kwaye injineli yethu iya kubonelela ngenkonzo yaphesheya nayo.
Abaxhasi kwihlabathi liphela
Ndwendwela isityalo sabathengi bethu kwihlabathi liphela
Isibhedlele esidibeneyo seYunivesithi yaseQingdao
U-Anhui Yingshang Isibhedlele sokuqala
Isibhedlele seMpilo kaMama noMntwana
Isibhedlele sabantu baseNanxian
Isibhedlele saseShenyang sesithandathu sabantu